ဗီဒီယို - Colts.com သည်စပွန်ဆာများအတွက်ဗီဒီယိုကြော်ငြာကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ | Martech Zone
ဗီဒီယို - Colts.com သည်စပွန်ဆာအတွက်ဗီဒီယိုကြော်ငြာကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 13, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Pat သည် Colts မိသားစုများအတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သည်ဟုထင်သောဗီဒီယိုကိုတင်ခဲ့သည် Colts.com, myIndianaFootball.com နှင့် MyColts.net ။ သူတို့ဟာတကယ်ကိုလှပတဲ့ဗီဒီယိုဖွင့်စက်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ကြတာ၊ တစ်စုံတစ် ဦး က ၄ င်းကိုသူတို့၏ဆိုဒ်တွင်ထည့်သွင်းတိုင်းသူကြော်ငြာသူသည်ပရိသတ်အသစ်သို့ရောက်ရှိသည်။ အရမ်းကောင်းတယ်
နှစ်စဉ်အခြေခံအားဖြင့် Colts.com သို့ visitors ည့်သည် ၇.၅ သန်းဖြင့် Pat သည်အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်သည်။ သို့သော်အားကစားကွင်းသို့ 7.5 ည့်သည် ၂၈၀,၀၀၀ - မည်သည့်အဖွဲ့က ပို၍ အရေးကြီးသနည်း။ Colts နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်သည့် visitors ည့်သည် ၇.၅ သန်းသည်အဖွဲ့နှင့်လက်မှတ်ရောင်းခြင်းထက်သာလွန်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ သို့သော်, သင်ကျိန်းသေငြင်းခုံနိုင်ပါတယ်ထိုင်ခုံအတွက် Butt ဂိမ်းမှာဆူညံသံဖြစ်ကြပြီးတသမတ်တည်းဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီအပေါ်အပြောင်းအလဲကောင်းတစ် ဦး အပိုင်းအစဖြုန်းဖို့အဖွဲ့၏လုံလောက်သောထင်သောရှေးရှေးဖြစ်ကြသည်။
ငါလက်မှတ်ဝယ်လက်, Pat နှင့်အတူသွားရလိမ့်မယ်! အဲဒီလူတွေအများစုဟာကောင်းမကောင်းရာသီတွေတစ်လျှောက်မှာပိုကြာကြာနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ crowd ည့်သည် ၇.၅ သန်းမှထိုလူစုလူဝေးကြီးထွားလာရန်သင်ရရှိထားသည့်သြဇာကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှလျစ်လျူမရှုပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ပရိသတ်များနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ရင်းရင်းနှီးနှီးရင်းနှီးသည့်အမြတ်အစွန်းဖြစ်သည်။
Tags: အယူအဆစစ်တမ်းconcept ကိုစမ်းသပ်ခြင်းအယူအဆစမ်းသပ်စစ်တမ်းဘက်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဂေဟစနစ်အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး infographicအထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာစစ်တမ်းwordpress muwordpress multidomain
13:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 8, 47
, Doug လာကြ ... Bun အပြင်ဘက်ထင်! (er, အားကစားကွင်း) 🙂
13:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 01
ဟေး! ၇.၅ သန်းဟာအကျိုးအမြတ်များတဲ့အမြတ်အစွန်းဖြစ်တယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်။